Paradise Hills (2019) | MM Movie Store
အရာအားလုံး နသေားတကလြှပနတေဲ့ နရောလေးတဈခု…နတျဘုံနတျနနျးလို့တောငျ တငျစားလို့ရတဲ့ဒီနရောလေးနာမညျက သုခဘုံတဲ့။ဒီသုခဘုံက ပငျလယျကွီးရဲ့အလညျကြှနျးတဈခုမှာသီးခွားကမ်ဘာလေးတဈခုလိုတညျရှိနတောပါပွငျပကမ်ဘာက မလိမ်မာတဲ့ အဆငျမပွတေဲ့ ကလေးတှကေိုဒီသုခဘုံကိုမိဘတှကေပိုကျဆံမြားမြားပေးကာပို့ကွပါတယျ။
ထူးဆနျးတာက ဒီသုခဘုံကိုရောကျတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျးမိဘတှလေိုခငျြသလို နှဈလအတှငျးဖွဈသှားကွတာပါပဲ။တဈနမှေ့ာတော့မိဘပေးစားတဲ့သူနဲ့မယူခငျြလို့ကလနျကဆနျလုပျနတေဲ့ မိနျးကလေး အူမာဟာလဲဒီသုခဘုံကို ရောကျလာခဲ့ပါတော့တယျ။
အရာအားလုံးပွီးပွညျ့စုံတဲ့ဒီသုခဘုံရဲ့နောကျကှယျကအကွောငျးအရာတှကေို တဖွညျးဖွညျးသိလာတဲ့အခါ…အူမာတဈယောကျဘာတှဆေကျလုပျမလဲ?သုခဘုံကရော ဘာတှဖွေဈနတောလဲ?
စတဲ့မေးခှနျးတှနေဲ့အဆုံးထိ စိတျဝငျတစားကွညျ့ရှုရမယျ့ကားလေးရဲ့နာမညျကတော့Paradise Hills (2019)ပါ။နာမညျကွီးမငျးသမီးတှဖွေဈတဲ့Emma Roberts, Milla Jovovich စတဲ့မငျးသမီးတှပေါဝငျပွီးဇာတျလမျးဇာတျအိမျထူးခွားတဲ့ ဒီကားလေးကတော့Imdb Rating 6.3/10 Rotten Tomatoes 63%ရရှိထားပါတယျ။
အရာအားလုံး နေသားတကျလှပနေတဲ့ နေရာလေးတစ်ခု…နတ်ဘုံနတ်နန်းလို့တောင် တင်စားလို့ရတဲ့ဒီနေရာလေးနာမည်က သုခဘုံတဲ့။ဒီသုခဘုံက ပင်လယ်ကြီးရဲ့အလည်ကျွန်းတစ်ခုမှာသီးခြားကမ္ဘာလေးတစ်ခုလိုတည်ရှိနေတာပါပြင်ပကမ္ဘာက မလိမ္မာတဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ ကလေးတွေကိုဒီသုခဘုံကိုမိဘတွေကပိုက်ဆံများများပေးကာပို့ကြပါတယ်။
ထူးဆန်းတာက ဒီသုခဘုံကိုရောက်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းမိဘတွေလိုချင်သလို နှစ်လအတွင်းဖြစ်သွားကြတာပါပဲ။တစ်နေ့မှာတော့မိဘပေးစားတဲ့သူနဲ့မယူချင်လို့ကလန်ကဆန်လုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေး အူမာဟာလဲဒီသုခဘုံကို ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
အရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့ဒီသုခဘုံရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရာတွေကို တဖြည်းဖြည်းသိလာတဲ့အခါ…အူမာတစ်ယောက်ဘာတွေဆက်လုပ်မလဲ?သုခဘုံကရော ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ?
စတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့အဆုံးထိ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှုရမယ့်ကားလေးရဲ့နာမည်ကတော့Paradise Hills (2019)ပါ။နာမည်ကြီးမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့Emma Roberts, Milla Jovovich စတဲ့မင်းသမီးတွေပါဝင်ပြီးဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်ထူးခြားတဲ့ ဒီကားလေးကတော့Imdb Rating 6.3/10 Rotten Tomatoes 63%ရရှိထားပါတယ်။